Home » Beachbody » 55% Off Body Beast! Ny $ 39.90 ihany no voafetra ho fotoana voafetra
55% Off The Body Workout System!
Ho an'ny fotoana voafetra dia azonao atao ny mamonjy 55% amin'ny programa fampiasan'ny Bodybody ao amin'ny Bodywork. Amin'ny fividianana vatomamy vatana, ianao dia mandoa $ 39.90 plus fandefasana sy fitsinjarana ny programa feno amin'ny DVD. Ny biby biby dia mihazakazaka ho an'ny $ 89.95
Inona no atao hoe bibidia?
Ny vatan'ny biby dia iray amin'ny fanatanjahan-tena voalohany, ny fihinanana sakafo, ary ny famenoana ny rafitra. Izy io dia ahitana ny 12 Dynamic Set Training Training amin'ny DVD 4.
Izy io dia noforonina ho anao mba hananganana vatana lehibe sy musculature ao anatin'ny fotoana fohy araka izay tratra. Rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy, ny Body Beast dia afaka manampy ny 10 lbs ny tazomina mahatsiravina ao anatin'ny kely ny andro 90. Ny biby biby dia mifototra amin'ny foto-kevitry ny Dynamic Set Training.
Dinamic Set Training dia sehatra manokana amin'ny fitsangatsanganana sy ny repetition izay mameno ny fotoana hozatry ny tebiteby miaraka amin'ny tanjona ny hampitsahatra ny hozatra sy ny "manamboatra" kokoa ny muscle fibre. Ny Dynamic Set Training koa dia manampy amin'ny fanatsarana ny famokarana testosteron ny vatanao. Testosterone no hormone tena tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ny arintany, ka ny testosterone kokoa ny vatanao no mahatonga azy ho haingana kokoa.
Kitiho ny faneva etsy ambany raha te hahalala bebe kokoa momba ity fivarotana 55% off Body Beast ity
* Ity fivarotana vatana 55% Off amin'ny biby ity dia misy valiny amin'ny 3 / 7 / 16 12: 00 AM EST. Ny vidin'ny vokatra sy ny fampahafantarana dia marina araka ny daty / vanim-potoana voalaza ary mety hiova. Ny fampahafantarana ny vidiny sy ny fampahafantarana rehetra hita amin'ny Beachbody amin'ny fotoan'ny fividianana dia ampiharina amin'ny fividiananao ny programan'ny Body Beast.
March 7, 2016 FitnessRebates Beachbody Tsy asian-teny